"Elysion", nke Aida Herrera - Booktrailer | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
"Elysion", nke Aida Herrera - Booktrailer
Elysion obu akwukwo mbu Aida herrera, bipụtara Akwụkwọ akụkọ Red Circle. Akwụkwọ ọgụgụ a "Ọ ga-emikpu anyị n'ime ịhụnanya na-enweghị atụ na ihe omimi". Bụ "Akụkọ ịhụnanya nke na-emetụ ịhụnanya, ọchịchọ na aghụghọ" ma "Ọbọp ke a uwe nke anụ ahụ, ya mere, ọ bụ tumadi kwesịrị ekwesị n'ihi na ndị okenye."
Akụkọ a malitere mgbe Alex, bụ onye protagonist, na-eteta n'ụra mgbe ọ tara ahụhụ nnukwu ihe mberede okporo ụzọ. Ihe mbụ ị hụrụ mgbe ị mepere anya gị bụ mma mara mma, nke a na-amaghị ama nke na-ewute gị. N'oge a, ịchọ onye a na-amalite, ọchụchọ nke na-aghọ akụkọ na-akpali akpali nke jupụtara na mmetụta na ihe omimi. "Anwansi nke ịhụnanya na-enweghị ngwụcha ga-ekpuchi onye ọ bụla nke kpebiri ịbanye na peeji ya."
Alex na-eteta n'ụra ọtụtụ izu mgbe ọ nwesịrị nnukwu ihe mberede ụgbọ ala ma chọpụta na ọ nweghị ncheta nke oge gara aga, ọ maghị onye ọ bụ, afọ iri atọ nke ndụ ya na-apụ n'anya na mberede.
Anya izizi ya buru ibu ma mara mma nke na achapu ahihia ngwa ngwa, o wee hu ha n’anya.
N’ụzọ dị ịtụnanya, nkọwa ahụ adabaghị onye ọ bụla nọ ya nso. Alex enweghị ike ichefu ya, ọ nwere mmasị miri emi n'ebe nwoke dị omimi dị n'azụ anya ahụ. Na-atụghị anya ya, ọ malitere ịpụta na nrọ ya, nke Alex nwere ike, n'aka nke ya, ịmata ebe ndị bụ akụkụ nke ndụ ya n'oge ụfọdụ, nke kpaliri ya ịga n'ihu na nyocha ahụ.
Nchọpụta a maka njirimara ya na enigim enigistic ga-eduga ya ịchọpụta ụwa nke ọ na-enweghị ike iche n'echiche; ndu ya abughi ihe o yiri ka o gha eweghi oge iji tinye aka na ihe omuma di omimi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » "Elysion", nke Aida Herrera - Booktrailer
Kedu ihe ị ga-agụ?